Abwaan Cabdi Shire iyo Abwaano Kale oo Maanta Muqdisho Gaaray
May 6, 2012 - 1 Jawaab	Number of View: 308Share
Muqdisho:- Magaalada Muqdisho ee xarunta Soomaaliya maanta waxaa soo gaaray wafti fanaaniin ah oo uu hoggaaminaayo Guddoomiyaha kooxda wadaniga ah ee Qaylo Dhaan Cabdi Shire Jaamac Ciyaar Jecel.
Soo dhoweynta xubnahaan isugu jiray Abwaaniinta iyo Fanaaniinta ayaa waxaa ka qayb qaatay dad kala duwan oo ay kamid yihiin maamulka Tiyaatarka qaranka, qaar kamid ah fanaaniinta Muqdisho ku nool iyo dad kale oo farabadan.
Markii ay kasoo degeen garoonka Aadan Cadde ayaa waxaa halkaasi ka hadlay Guddoomiyaha kooxda Qaylo Dhaan Cabdi Shire Ciyaar Jecel, waxaana uu faah faahin ka bixiyey safarkiisa.
Cabdi Shire waxa uu sheegay in uu dalka ka maqnaa muddo 24-sano ah, waxaana uu sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay in uu maanta dib ugu soo laabto magaalada Muqdisho.
Cabdi Shire waxa uu intaasi ku daray in uu Muqdisho ka dhoofay sanadkii 1988-dii xilligaasi oo uu garoonka diyaaraha Muqdisho ka raacay diyaaraddii shirkadda duulimaadka qaranka Soomaaliyeed ee Somali Airlines.
Mar uu faah faahin ka bixiyey ujeedada safarooda ayaa waxa uu sheegay Mr Ciyaar Jecel in ay qayb ka tahay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen marxaladda kala guurka ee lagu jiro.
Sidoo kale waxa uu xusay in ajandaha safarkooda ay qayb ka tahay sidii ay u dhex dhexaadin lahaayeen Baarlamaanka Soomaaliya oo iminka u kala jaban labo garab, waxaa la xusuustaa in Qaylo Dhaan ay hees ka tiriyeen arrimaha Baarlamaanka.
Ugu dambayntii Guddoomiyajha kooxda Qaylo Dhaan Cabdi Shire jaamac Ciyaar Jecel waxa uu sheegay in kooxada Qaylo Dhaan ay tahay waddani ayna ka hadasho dhacdooyinka dalka ka dhaca, hase yeeshee ay jiraan dad kaso horjeeda sida xubno kamid ah Baarlamaanka wakhtigisiii dhamaaday ee iminkana labada garab noqday.
Abwaaniinta iyo Fanaaniinta Muqdisho soo gaaray sidoo kale waxaa kamid ahaa Abwaan Awliyo oo isaga sheegay in uu ku faraxsan yahay imaanshaha Muqdisho.
Kooxda Qaylo Dhaan oo ah koox waddani ah ayaa waxaa la aas-aasay 3-dii Bishii December ee sanadkii 2009-kii maalintaasi oo ahayd maalintii uu dhacay qaraxii gumaadka ahaa ee Hotel Shaamow.
Waxii ka dambeeyey wakhtigaasi kooxdu waxay soo saartay heeso badan oo ay uga hadleen dhibaatooyinka dalka ka jira, heestii ugu dambaysay oo ay qaadaan waxa ay soo saareen bishii April, waxayna kaga hadleen qaraxii Tiyaatarka, heestaasi waxaa lagu magcaabaa QOORTA GOOYA BAHALADA.
Yurub says:	May 11, 2012 at 5:09 am	A/c dhamaanba ummada soomaaliyeed gaar ahaan reer muqdisho waxaan ahay gabar soomaaliyeed oo ku nool Australia waxaan aad ugu farxay in ay maanta soomali walaalaaloowday garatayna in nin walba ninka dadka u xiggaa yahay ninka wadaninimadu ku dheehan tahay waxaana marlabaad u soo noolaan karaa hadii aan wadanigeena qiimayno not qabiilkeena imaansha cayaar jecel uu yimid muqdisho waa mid aad noo dhiiri galinaysa in aan ku soo noqono muqdisho oo ay iigu dambeysay anoo caruur ah jirana 11sano maantana aan ahay hooyo caruurtayduna ayna waligood arag ciida soomaliya bale nasiib wanaag waxay tani astaan utahay in aan markale ku noolaan karno guryahayagii ciidayadii iyo calankayagii oo naga dul babanaaya insha allah illay soomaali ha mideeyo nabad waartana hasiiyo aamiin aamiin aamiin